अन्तिम संस्कार गरिएका व्यक्ति जब साँझ जिउँदै घर फर्केपछी…. – साँचो खबर
अन्तिम संस्कार गरिएका व्यक्ति जब साँझ जिउँदै घर फर्केपछी….
यदि परिवारका कुनै सदस्यको बिहान अन्तिम संस्कार गरिन्छ र साँझ ऊ जीवितै घर फर्किन्छ भने त्यो घरका मान्छेको अवस्था कस्तो होला? हो, यस्तै एक आश्चर्यजनक घटना भारतको मध्य प्रदेशको शियोपुरमा भएको छ। जहाँ अन्तिम संस्कार गरेको केही घण्टामै परिवारका सदस्य जीवितै फर्किए। जुन घटना देखेर प्रहरी र परिवार दुवै तर्फको होस उड्यो र सत्य कुरा बुझेपछि दुबै चकित समेत भए ।
Previous: प्रदेश १ मा आपराधिक घटनासँग सम्बन्धित दुई हजार एक सय सातवटा मुद्दा
Next: स्थायी कमिटीको बैठकअघि ओली र दाहाल छलफलमा